के बाल हल्का गर्न सबै भन्दा राम्रो रंग छ। प्रमुख सिफारिसहरू
भन्दै ज्ञात हाइड्रोजन पेरोक्साइड छ साँच्चै पाठ्यक्रम धेरै सुन्दर महिला, यो निराधार छ। उज्ज्वल सुनको कपाल एक महिला एक विशेष कोमल र poignancy दिन्छ। तर, म विपरीत गर्न कालो कपाल रंग छ अघि, तपाईं ध्यानपूर्वक विचार गर्नुपर्छ सबै "फाइदा" र "बुरा" वजन। पहिले, सबै महिला कहिलेकाहीं irreparably, केश गम्भीर हानि कारण, खैरो कपाल हो, र दोश्रो कुरा, केही रंग कपाल को स्पष्टीकरण र थप पूरा discoloration। अन्तमा, छवि र उपस्थिति को एक तेज परिवर्तन सधैं जायज छैन। त्यहाँ अझै पनि एक गोरा बन्न ठूलो इच्छा छ भने, त्यसपछि staining responsibly हुनुपर्छ लागि प्रक्रिया जानुहोस्। पहिले तपाईं चयन गर्न आवश्यक रंग को प्रकारको कपाल हल्का गर्न सबै भन्दा राम्रो छ के। रंग को चयन staining पछि प्राप्त गर्न चाहेको प्रभाव निर्भर गर्दछ।
अलिकति Brightening आमूल उपाय गर्न resorting बिना बाहिर गर्न सकिन्छ, यो एउटा toning बाम वा फोम प्रयोग गर्न suffices। प्रयोग, पाठ्यक्रम, तपाईं मात्र एक निश्चित व्यावसायिक कस्मेटिक्स (प्रदर्शन राम्रो रङ्ग Foams र दृढ Wella को balms) आवश्यक र यो गर्न निर्देशन मा निहित सिफारिसहरू परिचित। यसलाई गाढा बाक्लो कपाल बाक्लो संरचना उजागर टिन्टिङ एजेन्ट सानो विषय हो भन्ने मनमा महत्त्वपूर्ण छ, र इच्छित परिणाम संभावना हासिल हुनेछैन। रङ्ग बाम उदाहरण, गाढा-हल्का खैरो रंग को लागि, पातलो नरम कपाल मा प्रयोग गर्न राम्रो छ। परिणामस्वरूप छाया छोटो राखिएको छ। प्रक्रिया staining हरेक 1-2 हप्ता बारम्बार हुनुपर्छ। पातलो कपाल रासायनिक यौगिकहरु प्रयोग बिना मानिसहरूको हालतमा हल्का गर्न सक्नुहुन्छ। , शोरबा chamomile (पानी 1 कप2चमचा), कागति को रस: राम्रो brighteners प्राकृतिक मह (पानी संग 1 1 पतला) छन्। यो बाल र खोपडी dries रूपमा अन्तिम, सावधानीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्छ।
के रंग एक लामो समय को लागि राम्रो अप उज्यालो? राम्रो रंग उज्यालो, प्राकृतिक बाल रोगन विनाश अमोनिया समावेश जो - melanin। तथाकथित स्थायी रंगाई2महिना, धेरै लामो राखिएको। तथापि, इच्छित परिणाम डाटा रंग पनि गाढा भद्दा कपाल दिन छैन। मात्र नियमित चित्रकला संग चाहेको रंग हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो Schwarzkopf Igora शाही, l'Oreal Professionnel, Wella Professionnel, राम्रो दाग लागेको खैरो रूपमा अमोनिया को आधारमा रंगाई रचनाहरूको।
सबै भन्दा राम्रो रंग उज्यालो के हो? यस प्रश्नको जवाफ गाह्रो छ। एक रंग को आवेदन को परिणाम कपाल को प्रकार, आफ्नो प्राकृतिक रङ र इच्छित अन्तिम परिणाम निर्भर गर्दछ। कुनै पनि रंग एक आवेदन मा दुई वा तीन भन्दा बढी रंग कुनै अप उज्यालो। मात्र नियमित प्रयोग संग र इच्छित रंग प्राप्त गर्न सक्छन् पायस को विरंजन मा रंग र अमोनिया को प्रतिशत को सही चयन प्रदान। आफैलाई घर रंगाई कम्पनीहरु l'Oreal र Wella लागि सेट प्रयोग गरेर, आफ्नो कपाल हल्का गर्न सक्नुहुन्छ। यी किरा को संरचना तयार बनाएको रंग संरचना र मायालु बाम कुल्ला समावेश गर्नुहोस्।
एक प्लेटिनम गोरा बन्ने कपाल हल्का गर्न सबै भन्दा राम्रो रंग कस्तो छ? धेरै कालो कपाल पहिलो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को आधारमा विशेष समाधान discolored गर्नुपर्छ र त्यसपछि रंग इच्छित छाया रंग गर्न। पेरोक्साइड समाधान त घर मा तयार भएको थियो। हार्ड कालो कपाल को लागि (उज्यालो र पातलो कपाल 6-10% औं लागि) पेरोक्साइड को 8-12% समाधान लिन्छ, तरल अमोनिया को 1 spoonful र हल्का तरल साबुन वा स्याम्पु2चमचा थपिएको थियो। स्पष्टीकरण को डिग्री जाँच गर्न, यो, पहिलो Strand staining परीक्षण गर्न सम्भव छ। खैरो वा गाढा खैरो कपाल सक्नुहुन्छ पूर्ण विशेष पाउडर र oxidizer संग discolored हुन। पाउडर मात्र व्यावसायिक रंग मा सम्भव छ लागू हुन्छ।
बाल हल्का गर्न सबै भन्दा राम्रो रंग कस्तो छ, हरेक महिला आफ्नो कपाल को संरचना र विशेषताहरु बुझेर नै लागि निर्धारण गर्नुपर्छ। तर कुनै पनि बाल डाई संग ठूलो तनाव "अनुभव"। प्रकाश, र पनि अधिक बाल discoloration तिनीहरूलाई गम्भीर हानि। त्यसैले, रङ लगाइएको बाल स्थिर नर्सिङ हेरविचार आवश्यक छ।
एक पेशेवर हेयर स्टाइलिस्ट लागि सैलून गर्न खोल्दै सल्लाह र सबै आवश्यक नियमहरू संग staining गर्न सकिन्छ। साथै, एक राम्रो विशेषज्ञ सधैं तपाईं सबै भन्दा राम्रो रंग कपाल हल्का के भन्नु।
बाम estel Toning
सुन्दर braids छोटो कपाल बुनो
बाल को रंग सुनौलो-खैरो छ: रंग, विशेष गरी चित्रकला र सिफारिसहरू
घरमा सुन्दर कपाल - यो सजिलो छ!
एक स्पाइक कसरी स्पिन लागि: चरणमा सिक्न
Zizi-pigtails: लाभ र braiding को विधिहरू
चिल्लो दाग ल्याउन कसरी केही सरल सुझाव
आधार ब्लक: विशेष गरी प्रयोग
Thermomug Contigo - आधुनिक, आरामदायक, मूल
Snobbery - यो psevdoaristokratichnost
यो के हो, मरेका मानिसको सपना देख्न?
काममा फेसटाइम सक्रियता र प्रश्न र त्रुटिहरू सही के हो
अभिनेता Pletnev Kirill Vladimirovich: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन, Filmography
इस्टर केक - Gourmets लागि नुस्खा।
कलेजो pate - शाही भोजन
औषधि "tetracycline" (आँखा मरहम): निर्देश